माण्डवीमा १७ करोडको रंगशाला निर्माण हुँदै
प्यूठान । प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न प्रदेश स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न थालेकोे छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रू. १७ करोडको लागतमा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मार्सिवाङमा उक्त रंगशाला निर्माण गर्न थालिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) त...
घाम नलाग्दा चल्दैन फोन
रुकुम । देशमा कुल जनसंख्याभन्दा बढीमा मोबाइल सेवा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरू फोनको गुणस्तर सुधार र फोरजी इन्टरनेट विस्तारमा लागेको पनि सुनिन्छ । तर रुकुम पश्चिममा भने थ्रीजी, फोरजी इन्टरनेटको कुरै छाडौं, मोबाइल फोन सम्पर्क समेत राम्ररी हुँदैन...
बाँके–बर्दियामा ८६ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ
नेपालगञ्ज (अस) । बाँकेर र बर्दियामा यस वर्ष ८६ हजार ७५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सकिएको छ । यी जिल्लामा समयमै धान रोपाइँ पूरा भएको कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँकेले बताएको छ । समयमै मनसुन शुरू भएकाले छिट्टै धान रोपाइँ सकिएको केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सागर ढकालले जानकारी दिए । केन्...
गाउँपालिकाकै लगानीमा विद्युत् विस्तार गरिँदै
नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा वडा नं. ३, ४ र ५ मा विद्युत् विस्तार गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ४ धामपुरमा विद्युत् सबस्टेशन निर्माण भए पनि कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रशारण लाइनको काम ठेकेदारको ढिलासुस्तीले एक दशकदेखि अलपत्र परेपछि गाउँपालिका आफै विद्युत् वि...
व्यावसायिक माछापालनमा आकर्षण बढ्दै
दाङ । दाङमा व्यावसायिक माछापालनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । वर्षेनि माछापालन गर्ने व्यवसायीको संख्या र यस क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको हो । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा कुल ७० ओटा मत्स्यपालन उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका अनुसार गत आवसम्ममा दर्ता भएका मत्स्...
प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्न १० हजार घुस लिँदै गर्दा एक शिक्षक पक्राउ
साउन २७, दाङ । अख्तियारको टोलीले दाङमा एक शिक्षकलाई १० हजार घुस रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ । घोराहीको रझेना माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गणेश केसीलाई सोमवार अख्तियार अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्जबाट खटिएको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको हो । सो विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको सिभिल इञ्जिनियरिङको प्रवेश परीक...
घाम नलाग्दा चल्दैन फोन !
साउन २७, रुकुम । यस जिल्लाको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१, मैकोट गाउँका भरत पुुनले बिहान र साँझ फोन गर्न पाउँदैनन् । उनले बिहान साढे १० बजे अगाडि र बेलुकी ९ बजेपछि फोन गर्न नपाएको बताए । उनले भने,‘जति आकस्मिक र जरुरी काम परे पनि साथमा भएको मोवाइलबाट कुरा हुँदैन ।’ ...
स्थानीय सरकारको लगानीमा विद्युत् विस्तार
साउन २७, नेपालगञ्ज । बाँकेको एक स्थानीय सरकारले आफ्नै लगानीमा विद्युत् विस्तार गर्न लागेको छ । स्थानीय राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३,४ र ५ मा गाउँपालिकाकै लगानीमा विद्युत् विस्तार गर्न लागेको हो । वर्षौंदेखि अन्धकारमा वस्दै आएका राप्तीसोनारीका बासिन्दा विद्युत् बाल्...
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाइँदै
काठमाडौं । भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन अन्तरसरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आइतवार भएको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिरकण, सडक विभाग तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समन्वय गर...
तिलोत्तमामा असोजमा लगानी सम्मेलन
रूपन्देही । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी असोज ९ गते ‘तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । नगरमा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनु सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य रहेको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । सम्मेलनमा वि...